Symantec ကိုအစားထိုးတော့မည်ဆိုလျှင် ? - Bitdefender Myanmar
Symantec ကိုအစားထိုးတော့မည်ဆိုလျှင် ?
မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုကို ပြုလိုက်ပါ
Bitdefender® နှင့်အတူ အနိုင်ယူလိုက်ပါ –
ဆုတံဆိပ်ရ မျိုးဆက်သစ် လုံခြုံရေး suite
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိလိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ
“cloud ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့မှာ console တစ်ခုတည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်၊ စေလွှတ်ရန်လွယ်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုအပ်ခဲ့သည်။ ကဏ္ဍအလိုက်ထုတ်သောထုတ်ကုန်များကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ Bitdefender မှာ endpoint detection response (EDR), anti-virus, anti-malware, behavior learning နှင့် patch management အားလုံးကို အတူတကွပေါင်းစည်းထည့်ပေးထားသော ဘက်စုံ အလွှာလိုက် solution တစ်ခုကို ပေးထားသည်။”
– Lance Harris, သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
“ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် file-less, zero-day တိုက်ခိုက်မှုများ ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများအား ထောက်လှမ်း၊ရှောင်ကွင်းရာတွင် ကူညီပေးသော GravityZone Elite ၏ machine learning နှင့် sandbox analysis စွမ်းဆောင်ချက်များကို အထူးသဘောကျနှစ်သက်သည်။ GravityZone မှာ အကောင်းဆုံး malware ရှာနိုင်စွမ်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးခဲ့သည်။”
– Johan Vorsterman, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပရောဂျက်ခေါင်းဆောင်
“ကျွန်တော်က အလုပ်တွေကို အမြန်ပြီးအောင်လုပ်ရတာကြိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ဟာ သူတို့ကို အချိန် ၂ လ ပေးထားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး (ပြည်နယ် ၁၀ ခုမှာရှိတဲ့ သွားဆေးခန်း ၂၇၅ ခု) မှာရှိတဲ့ Symantec ကို ဖယ်ပြီး Bitdefender ကို ၃ ပတ်အတွင်း အပြီး install လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး အမြဲဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မှာလဲ…”
– Kevin Schokora, အိုင်တီ လုပ်ငန်းပိုင်းများ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
Endpoint လုံခြုံရေးတွင် သက်သေထူ ဦးဆောင်နေသူတစ်ဦး
“ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရာတွင် ကြာြမင့်ချိန်အား ၉၄% နီးပါး လျော့ချနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပိုမို တိုက်ရိုက်ကူညီပေးနိုင်သော ပရောဂျက်များ ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ရှိခြင်းပင်။”
– Matt Ulrich, Network စီမံအုပ်ချုပ်သူ, Speedway Motorsports
Bitdefender GravityZone ကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တာလဲ
“package တစ်ခုအတွင်းမှာ မယုံနိုင်စရာ ပြီးပြည့်စုံပြီး သက်ရောက်မှုအားကောင်းသော endpoint လုံခြုံရေးစနစ်”
– Gartner PeerInsightsTM မှ သုံးသပ်ချက်တစ်ခု, ၂၀၁၉
✔️ ကမ္ဘာ့ အားအကြီးဆုံး ကာကွယ်မှု
ညှိပေးနိုင်သော Machine learning၊ sandbox analyzer၊ anti-exploit နှင့် behavioral analysis အပါအဝင် နည်းပညာပေါင်း ၃၀ ကျော် ပါဝင်ပေါင်းစည်းထားသော အဆင့် ၁ နေရာရှိ ကာကွယ်မှု နှင့်အတူ တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ၉၉% အား အလိုအလျောက် တားမြစ်နိုင်သည်။
✔️ ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE (EDR) ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း
သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ရပ်များအား အလုံးစုံ အချိန်ကိုက် တွေ့မြင်နိုင်စေသည်။ တူညီသော management console မှ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို ထိထိရောက်ရောက် ထောက်လှမ်းရှာဖွေ၊ တုံ့ပြန်နိုင်သည်။
✔️ အန္တရာယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း နှင့် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ခြင်း
လုံခြုံရေးအနေအထားအား integrated device နှင့်အတူ application control, patch management, encryption အပါအဝင် အခြားနည်းပညာများဖြင့် အားကောင်းစေသည်။ integrated Endpoint Risk Analytics အား အဆက်မပြတ်ရရှိ၊ ဦးစားပေးပြီး အန္တရာယ်များကိုသတိထားမိရန် ပိုမိုအားဖြည့်ပေးသည်။
Symantec ထုတ်ကုန်များအတွက် တစ်ခုသော Bitdefender GravityZone
အဓိက ကွဲပြားခြားနားချက်များ BITDEFENDER GRAVITYZONE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION (SEP)
A comprehensive single-agent, single-console endpoint security solution ✓ endpoint အမျိုးအစားများအားလုံး (physical, virtual, cloud, mobile, email) နှင့် ဆက်စပ်ထားသော နည်းပညာစုတစ်စု ကို ခြုံထားသော integrated platform ✘ မျိုးစုံသောထုတ်ကုန်များ, agent များ နှင့် console များကို လိုအပ်ခြင်း
တူညီသော console မှ ထိန်းချုပ်သော integrated နည်းပညာများ –
Endpoint Detection and Response (EDR) ✓ အပြည့်အစုံ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည် ✘ သီးခြားထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Symantec EDR တစ်ခု လိုအပ်ခြင်း
လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှု ထောက်ခံချက်များပါသော Endpoint Risk Analytics ✓ အပြည့်အစုံ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည် ✘ မပေးထားပါ
အီးမေးလ် လုံခြုံရေး ✓ အပြည့်အစုံ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသော add-on ✘ သီးခြားထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Symantec Email Security.cloud တစ်ခု လိုအပ်ခြင်း
Patch Management ✓ အပြည့်အစုံ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသော add-on ✘ မပေးထားပါ
Threat Intelligence ✓ အပြည့်အစုံ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည် ✘ သီးခြားထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Symantec EDR နှင့် DeepSight Intelligence တို့ကို လိုအပ်ခြင်း
အခြေအနေ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းများ စနစ်များ ပါဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးအဝေးထိန်းဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့်ဖြေရှင်းမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း Blocklist များနှင့် စည်းကမ်းများ ကန့်သတ်ချက်ရှိခြင်း။ အဝေးထိန်းတုံ့ပြန်မှုမှာ သီးခြားထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Symantec EDR တစ်ခုလိုအပ်ခြင်း
တိုက်ခိုက်မှု မြင်နိုင်စွမ်း ပြီးပြည့်စုံသော မြင်ကွင်းများက တိုခြိမ်းခြောက်မှုကိုလျင်မြန်စွာနားလည်နိုင်ရန် စာသားအပြည့်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတင်ပြပေးခြင်း Antivirus သတိပေးချက်များမှာ ပိတ်ထားသော ဖိုင်များကို ခြိမ်းခြောက်စာသားအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ တင်ပြခြင်း။
အဆင့်မြင့် မြင်နိုင်စွမ်းအတွက် သီးခြားထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Symantec EDR တစ်ခု လိုအပ်ခြင်း
virtual နှင့် cloud အလုပ်များအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းညှိပေးပြီး ထိရောက်သော ဗိသုကာ ✓ GravityZone ၏ scan offloading, patented caching နှင့် scanning algorithms များမှာ Symantec SEP နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် virtualization density ကို ၅၅% ပိုမြင့်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး အက်ပလီကေးရှင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ၁၀% ပိုမြန်စေခြင်း ✘ လေးလံသော endpoint အေးဂျင့်များမှာ CPU တော်တော်များများ, memory နှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များအား နေရာယူခြင်း၊ virtualization density ကို လျော့ချခြင်း နှင့် တုံ့ပြန်ချိန် ပိုမိုကြာမြင့်ခြင်း
infrastructure-management tool များနှင့် integration သုံးပြီး လုံခြုံရေး-သွားလာလုပ်ဆောင်မှုကို အလိုအလျောက်ဖြစ်စေခြင်း ✓ VMware® vCenter Server, NSX-V နှင့် -T, AWS ပေါ်မှ VMware Cloud, Nutanix® Prism, Citrix® XenServer, AWS® EC2, Microsoft® Azure နှင့် Pivotal® Cloud Foundry တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ✘ မပေးထားပါ။ VMware နှင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ရန် သီးခြားထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Symantec Data Center Security (DCS) တစ်ခုလိုအပ်ခြင်း